? I-Oracle Tarot yasimahla | I-100% yeempendulo ezisebenzayo nezikhawulezileyo
La Ukufundwa kwetarot intle kwaye intle ekhoyo I-tarot yomlomo. Ngolu hlobo lokusasazeka uya kuba nokufunda okupheleleyo ngakumbi ukuze ukwazi ukulawula ubomi bakho ngempumelelo enempumelelo.
Yithi ndlela-ntle koloyiko lwakho, kunye neminqweno engakuvumeli ukuba ulale ebusuku kunye nathi ukufunda amakhadi aneempendulo ezikhawulezileyo kuyo yonke imibuzo yakho. (Jonga ukubaleka simahla kwi u-ewe okanye uhayi)
1 I-Oracle ekwi-Intanethi-yasimahla kunye nokufundwa kwamakhadi okuqinisekileyo
2 I-Star Oracle Tarot yasimahla
3 IBlue Oracle
4 Eyona nyaniso yeOracle
5 Intetho ye-Oracle
I-Oracle ekwi-Intanethi-yasimahla kunye nokufundwa kwamakhadi okuqinisekileyo
Manene namanenekazi, nanku sinishiya nani umlingo UJon, ingcali enkulu kwimvelaphi eyimfihlakalo ye amakhadi e-tarot. Uya kuba ne-100% eneenkcukacha zokufunda kunye nempumelelo eya kukumangalisa, kuya kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo:
Kuyimfuneko ukuba ngaphambi kokuphosa amakhadi I-tarot yomlomo, Cinga ngenyameko ukuba uza kuba yintoni umbuzo wakho, ukuze I-Oracle iyakuphendula ngale nto ndincoma ukuba uzenze ukhululeke, uthe cwaka. Vala amehlo akho kwaye ungazami ukucinga ngayo nantoni na, cinga nje ngokuphefumla kwakho, nokuba uphuma njani, kwaye ungena njani emzimbeni wakho.
Xa uyenzile imizuzu emi-2, vumela ingqondo yakho ibhabhe kwaye uthethe umbuzo ogqithise ingqondo yakho ngokuvakalayo. Isenokuba yeyedlulileyo, yangoku okanye yekamva lakho. Ngoku ukulungele yenza ukufundwa kwamakhadi asimahla.
I-Star Oracle Tarot yasimahla
Este Uhlobo lwetarot lolunye lwezona zithandwa kakhulu kwi el mundo yeesotericism kunye nabalandeli bemfihlakalo kunye neenkwenkwezi. Yeyona indala, kwaye ngaxeshanye eyona isebenzayo malunga nokuphendula imibuzo. Eyona nto ibaluleke kakhulu kuyo, ungayisebenzisa yonke imihla (ubuninzi kabini ngemini).
Nge I-tarot yasimahla ye-Oracle Uyakwazi ukubuza imibuzo oyifunayo kwimiba eyahlukeneyo yobomi bakho, nokuba kungumsebenzi, uthando, imali, usapho, izihlobo ... Kusetyenziswa iintlobo ezahlukeneyo zamakhadi okudlala, nokuba Omkhulu uArcana, i I-tarot yaseYiputa, i Iingelosi ze tarot, i Tarot ujongilanga, I-tarot yemali… Nezinye ezininzi.
Umgangatho wokudibanisa kwi I-Oracle yeBlue iyonke ngamakhadi angama-73. La makhadi aya kukunceda khetha eyona ndlela ilungileyo ebomini bakho. Ukuba ne ulonwabo olupheleleyo. Ayisiyiyo yonke into kobu bomi zizinto eziphathekayo, ngamanye amaxesha ukuba nesikhokelo somoya esihamba nawe kwimihla yakho nakumendo wobomi siya konwaba.
I-tarot iya kukunceda uzazi ukuba ungubani, kutheni ulapha, kwaye ikamva lakho liyintoni.
Eyona nyaniso yeOracle
Fumana I-Oracle iyinyani kwaye isimahla Kunzima xa sifuna ukuyikhangela kwi-Intanethi, ke sakufumanisa kwi-intanethi sineengcali ekunikezeleni ngale nkonzo ye-Oracle kunye neengcali zokwenyani, abaxeli-thamsanqa, abaneshologu ngokuthembekileyo, simahla nakwi-intanethi.
Enye yeenkonzo ezifunwa kakhulu ngabaxumi bethu yile IsiGrike, eyona ndlela yokwazi ukuba ikamva likuphethe ngantoni amakhadi e-tarot cast yi iingcali kunye iminyaka emininzi yamava. Kodwa, ithetha ntoni i-Oracle? Qhubeka ufunde ..
Ukuthetha nge-Oracle kukuthetha ngobugcisa bokubhula obufezekileyo enkosi Ukufundwa kwekhadi le-tarot. Kuyenzeka ukuba uphendule imibuzo emininzi enxulumene nekamva lomntu ofuna ukwazi. Ingaba u obona bugcisa bunamandla bokuvumisa kwindalo iphela ukuyila imibuzo malunga nokuba siyabuyekezwa na okanye hayi, (yeyona nto ikhathaza umntu).
Zininzi iintlobo ze I-tarot yomlomo, kwaye nganye yazo inomsebenzi okhethekileyo kumnyele wethu, ophendula eyona mibuzo ibalulekileyo kwihlabathi lethu.